Deep Nalaina Parts
Nalaina lalina Parts Assembly
Inona no atao hoe sary lalina?
Lalina sary dia namorona lamba vy dingana izay ny taratasy banga vy dia radially voasarika ho fatin'ny namorona ny milina asa ny totohondriny. Ny dingana noraisina ho "lalina" sary rehefa ny halalin 'ny voatsoaka anjara mihoatra ny savaivony
Inona no karazana fitaovana manao asa amin'ny ARTMETAL?
Fa lalina sary, safidy ara-nofo dia tena malalaka sy ara-barotra rehetra saika metaly ampiasaina dia misy amin'ny endrika coil taratasy na sary ho an'ny lalina. Ny tena zavatra ampiasaintsika dia Stainless vy 200-400 andian-dahatsoratra. Fitaovana hafa CRS, hrs, aliminioma, varahina, varahina Azo jerena ihany koa.
Inona avy ireo asa ara-nofo amin'ny thicknesses ARTMETAL?
0,1016 MG ny 9,525 MG (004 "ny .375")
Inona no mety ARTMETAL tolerances tratrarina?
Miaraka amin'ny fitambaran'ny maty sy ny faharoa machining afaka manome tolerances hatramin'ny .00254 MG (.0001 ")
Inona avy ireo fahaiza-manao asa faharoa ARTMETAL?
nipaipaika, ary atsofony, welding (TIG, mig, toerana), isehoan'ny tsy fahampian'ny proteinina, Stud, fifanandrinana miantana insertions, riveting, fiangonana, Electro-Nikosokosoka, milina Nikosokosoka (hairline, fitaratra), vovo-coating, fasika fanapoahana, passivation, voapetaka
Inona no Hataoko fa teny nindramina?
Afaka mandefa RFQ aminay amin'ny sary, na santionany na drafts amin'ny tombanana dia be, dia hanolotra anareo ao anatin'ny 2 andro fiasana.
Inona no sary dia afaka ARTMETAL amin'ny asa?
JPG, PDF, DWG, DXF, STEP, IGS, sns.
Inona no ARTMETAL ny fandoavam-bola teny?
Ahoana no ahafahako mandoa vola?
T / T, L / C, D / P, andrefana firaisana, sns Mampiasa ny fanondranana entana sy ny Ampidiro ny mpandraharaha handray ny fanonerana sy ny fandefasana ny antontan-taratasy dia namoaka amin 'ny anaran' ny mpandraharaha. Isika no miasa amin'ny mpanjifa ampitan-dranomasina nandritra ny taona maro (Ny asa fototra dia mpanamboatra sy FABRICATION).
Ahoana no Artmetal manome antoka ny toetra?
ISO9001 Artmetal dia voamarina, fitaovana amin'ny fanjakana-avy-ny-kanto milina sy manana mpiasa mahay, injeniera ekipa za-draharaha mba hikarakara ny tsirairay sy ny rehetra dingana famokarana. Raha manana olana tsara isika, dia hanitsy na manolo ny entana na refund ny vola.